आइसक्रिम चाट्दा अमेरीकामा यी युवालाई किन भयो जेल सजाय? कारण थाहा पाए पर्नु हुनेछ चकित (भिडियो हेर्नुहोस्) - Onlinenews Global
June 22, 2021 laxmiLeaveaComment on आइसक्रिम चाट्दा अमेरीकामा यी युवालाई किन भयो जेल सजाय? कारण थाहा पाए पर्नु हुनेछ चकित (भिडियो हेर्नुहोस्)
आइसक्रिम चाट्दैमा त जेल सजाय नहुनु पर्ने हो । तर अमेरीकामा भएको छ । एक ब्यक्तिले गरेको सानो गल्तीको अदालतले ठूलै सजाय दिएको छ । अमेरिकि नागरीकले आइसक्रिम चाट्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरे पछि उनलाई ३० दिन जेल सजाय सुनाएको छ । सो भिडियो २४ वर्षीय डी एड्रियन एन्डरसनले सन् २०१९ को अगस्ट महिनामा आइसक्रिम चाटेर फेरि फ्रिजमा राखेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हालेका थिए ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
पसलको सीसीटीभी क्यामरामा भने उनले भिडियो खिचिसकेपछि सो आइसक्रिम झिकेर किनेको देखिन्छ । उनलाई अदालतले ६ महिनाको जेल, १ सय घन्टाको ज्याला नपाउने काम, १ हजार अमेरिकी डलर जरिमाना र आइसक्रिम कम्पनीलाई १ हजार ५ सय ६५ डलर तिर्नुपर्ने आदेश सुनाएको हो।
अमेरिकी टीभी एबीसीका अनुसार एन्डरसन र उनका बाबुले प्रहरीलाई सो आइसक्रिम किनेको बिल देखाएका थिए । भिडियो सार्वजनिक भएपछि आइसक्रिम कम्पनी ब्लू बेल क्रिमरीज्‌ले फ्रिजको सबै आइसक्रिम हटाएर नयाँ भरेको थियो । एन्डरसनले अदालतमा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका थिए***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
भर्खरै हेलिकप्टर दुर्घ’टना हुँदा २ मन्त्री सहित ११ जनाको मु’त्यु !
June 14, 2021 June 14, 2021 laxmi
June 13, 2021 laxmi
माधवलाई २० प्रतिशत पुग्न नदिन ओलीले फाले अर्को अस्त्र, अब के होला ?